Ihe ngosi onyinye a na-enye onyinye dị egwu. Egwuregwu kachasị mma na-adịkarị na-esite n'eziokwu, na ntinye onyinye na-abụ ihe ọchị. Adịghị m poo-pooing enọ kpam kpam; Ekwenyere m na mmata ụlọ ọrụ dị oke mkpa. Ọ na-enye ihe akaebe nke ikike gị ma na-ewulite mmata nye ndị na-ege ntị dị oke mkpa. Anyị nwere ụlọ ọrụ na-ahụ maka mmekọrịta ọha na eze dị egwu anyị na-arụ ọrụ. Ha ejiriwo aka ha zuru n'aka anyị, na-akwalite ngwaahịa anyị (mbipụta a) dị ka akụ, ahịa dijitalụ anyị